BURMA: Online News & Analysis: February 2012
ခေတ်၊ စနစ် နဲ့ လူတွေ ဟာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ် - အပိုင်း (၁)
Changes require actions from the ground, not from media or speeches.
The central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power. Burma’s new constitution (2008) ensures that the military cannot be excised from the legislative process, and therefore little can be expected from the document on this front.
( Asian Society: Current Realities and Future Possibilities in Burma)
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ မှာ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း မီးလောင်မှု၊ ပေါက်ကွဲမှုတွေ ကြောင့် သေကြေ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ကို သတင်းတွေထဲမှာ မကြာခဏ ဆိုသလို ဖတ်ရှု့ ကြရပါလိမ့်မယ်။ တချို့ဖြစ်စဉ်တွေ မှာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ပေါ့ဆမှု၊ အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမှာ ညံ့ဖျင်းမှု၊ အလုပ်သမားတွေအပေါ် လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြား ပညာပေးမှု တွေမှာ အားနည်းမှု၊ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်း တွေ ကို အတုယူခြင်း တွေမှာ အားနည်းခဲ့မှု စတဲ့ ရလာဒ်ဆိုးတွေလို့ သုံးသပ်ရင် မှားလိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ယေဘူယျ အားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အသိပညာ အားနည်းမှုတွေ၊ စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ဆိုင်ရာတွေ မှာ အားနည်းမှု တွေကြောင့် ပိုမို ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ အဖြစ်ဆိုးတွေ နဲ့ ကြုံတွေ့ ခံစားခဲ့ရတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေဟာ ခေတ်နဲ့ မဆီလျှော်တော့တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ လူသားတွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အလေ့အကျင့်ဆိုး တွေကြောင့် ဆိုလည်း မမှား ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်သူများ အနေနဲ့ တခြားသော စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ ဒီလို ဖြစ်ရပ်ဆိုးတွေ နည်းပါးလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင် နေကြသလဲဆိုတာ လေ့လာဆည်းပူးပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေ ကို အတုယူ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေချင်ရင်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေးတွေ မြင့်မားလာစေချင်တယ် ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း အလေ့အကျင့် နည်းလမ်း ကောင်း တွေ ကို တော့ အခြေခံကျကျ ကျင့်သုံးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ လည်း လုပ်ငန်းခွင်၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ် တွင် သာမက နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ် အသီးသီးတွေ မှာ ပါ နိုင်ငံတကာ က အလေ့အကျင့် နည်းလမ်းကောင်း တွေ ကို အတုယူ ကျင့်သုံးဖို့ လိုပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေတ်၊ စနစ် နဲ့ လူတွေဟာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်လာစေဖို့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ၊ လက်တွေ့ကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ယနေ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံများရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံလောက ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေ မှာ ရေပန်းစား အသုံးဝင် နေတဲ့5S အလေ့အကျင့် ပုံစံ ကို နည်းလမ်း ပုံစံ ကောင်း တခု အဖြစ် ဥပမာပေး ပြီး ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းပုံစံ ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဘယ်လို ဆက်နွယ်မှုတွေ ရှိသလဲဆိုတာ သုံးသပ်တင်ပြသွားပါမယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်း မှီ ဖို့ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ အလေ့အကျင့် ကောင်း တွေ ကို အတုယူပါ
ယနေ့5S ကို စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့ နိုင်ငံများရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံကြီးတွေမှာ သာမက စီးပွားရေးနယ်ပယ်၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်၊ အစိုးရ ဌာနကြီးတွေ၊ လူမှု့ရေးနယ်ပယ်တွေ မှာ ပါ တွင်ကျယ်စွာ လေ့ကျင့် သင်ကြား အသုံးချလာတာတွေ ကို တွေ့လာရတယ်။5S ကို စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အဓိကကျတဲ့ အလေ့အကျင့် နည်းလမ်းပုံစံ တခု အဖြစ် လည်း လက်ခံ ထားကြတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ တိုယိုတာ၊ ဟွန်ဒါ ၊ ဂျီအမ်၊ ဖို့ဒ်၊ ခရိုက်စလာ စတဲ့ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ ၊ သံမဏိ စက်ရုံကြီးတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်း ကြီးတွေ မှာ5S ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေကို လူမြင်တဲ့ နေရာတွေ မှာ ချိတ်ဆွဲထားကြတာ တွေ့ကြရပါလိမ့်မယ်။ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ မှာ ကိုယ်ပိုင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဥပမာ- တိုယိုတာမှာ TPS ဆိုတဲ့ Toyota Production System တိုယိုတာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းပုံစံ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မှာ လူသိများလာတဲ့ စက်ရုံလုပ်ငန်း နှင့် စီးပွားရေးနယ်ပယ် တွေမှာ ခေတ်စားလာတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းပုံစံ “Lean” ဆိုတာလည်း TPS ဆိုတဲ့ Toyota Production System တိုယိုတာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းပုံစံ ကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်တယ်။ “Lean” ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်း ပုံစံ ကို မဟာ အင်အားကြီး နိုင်ငံ ဖြစ် တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်တပ် မှာတောင် လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေကြတာပါ။5S ဟာ “Lean” ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခု လည်းဖြစ်တယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ မှာ ကိုယ်ပိုင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ ဘယ်လိုပဲ ရှိကြစေကာမှု၊5S ကို အခြေခံကျတဲ့ နည်းလမ်းပုံစံ တပုံစံတည်း အဖြစ် ကုမ္ပဏီတိုင်း၊ နယ်ပယ် အသီးသီး မှာ လက်ခံ ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြတယ်။
ဆိုလိုတာက လူထုကို အကျိုးပြုစေမဲ့ အလေ့အကျင့် ကောင်းတွေ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်သူ့ဆီ က လာ လာ လက်ခံကျင့်သုံးဖို့ လိုတဲ့ စိတ်မွေးမြူ ကြရပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ခေတ် တခေတ် နဲ့ တ ခေတ် မှာ လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဟာ အသွင်မတူကြသလို၊ ဒီ လိုအပ်ချက်တွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာမှာ လူသားတွေရဲု့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အလေ့အကျင့်တွေဟာလည်း ခေတ်သစ်၊ စနစ် သစ် နဲ့ အညီ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုတွေ ရှိလာရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။
5 S ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း
5 S နည်းလမ်း ပုံစံ ကျင့်သုံးမှု ကို ဂျပန် နိုင်ငံက စတင်ခဲ့တယ်။ ဂျပန်ဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက် တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာ ဂျပန်နည်း ဂျပန် ဟန်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ တချို့ ဂျပန်နည်း၊ ဂျပန် ဟန်တွေကို ကမ္ဘာ့ က အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံခဲ့ရတယ်။ ဒီလို လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာအောင် ကျိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ5S ဟာ လူသိများလာတဲ့ နည်းလမ်းပုံစံ တခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေ တိုင်းမှာ ဒီနည်းလမ်းကို အခြေခံ သဖွယ် တွင်ကျယ်စွာ လက်တွေ့ အသုံးချလာတာတွေ့ရတယ်။
ဂျပန်လို မှုရင်း5S ကို Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shitsuke အဖြစ် ရည်ညွှန်းထားတယ်။ အင်္ဂလိပ် လို ဘာသာပြန်ဆိုမှု ပြုရာမှာတော့ -
၂) Set in Order
လို့ ရည်ညွှန်းခဲ့ကြတယ်။ တချို့ စက်မှုနိုင်ငံတွေက မှုရင်းပုံစံ ကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြီး၊ နောက်ထပ်3S Safety၊ Security၊ Satisfaction အဆင့် ကို ထပ်ထည့်ခဲ့ကြပြန်တယ်။5S နည်းလမ်း ကို စတင် လက်တွေ့ ကျင့်သုံး တဲ့ ကုမ္ပဏီ တိုင်း မှာတော့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှု ကို အဆင့် သုံးဆင့်ခွဲပြီး လုပ်ဆောင် လေ့ရှိတယ်။ Sort, Set in Order, Shine ကို ပထမ အဆင့် အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်တယ်။ ပထမ အဆင့် ဟာ အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဒုတိယ အဆင့် Standardize နဲ့ Substain ဖြစ်လာဖို့ လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ တတိယ အဆင့်မှာတော့ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း5S အလေ့အကျင့် ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စစ်ဆေးရေး၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး အဖြစ် အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ကြတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်မှာ မြန်မာ လို5S ကို လိုလိုနှင့် တိုတို အနက်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ရရင်တော့ -
၁) အသုံး မလိုတဲ့ အရာတိုင်း ကို ရှင်းထုတ်ပါ။
၂) အသုံးပြုနေတဲ့ အရာတိုင်းဟာ လည်း စနစ်တကျပုံစံ အတိုင်းရှိပါစေ၊
၃) သန့်ရှင်း ပြောင်လက် နေပါစေ၊
၄) လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံတွေဟာ တပုံစံ ထဲရှိရမယ်။
၅) ဒီ နည်းလမ်း ကို အလေ့အကျင့် (သို့) ဓလေ့ထုံးစံ လို ကျင့်သုံးပါ လို့ အနက်အဓိပ္ပွယ် ရပါတယ်။
5 S အကျိုးသက်ရောက်မှု (သို့) လုပ်ငန်းခွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် နည်းလမ်းကောင်း
5 S က ဘာတွေ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသလဲလို့ သိချင်သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာ တွေကတော့ Scrap၊ Waste လို့ဆိုတဲ့ အလေအလွှင့်ဖြစ်မှု နည်းပါးလာစေမယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အားကောင်းလာမယ်၊ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစေမယ်၊ အချိန် ပိုထွတ်လာမယ်၊ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုတွေ နည်းပါးလာစေမဲ့ ရလာဒ်ကောင်းတွေ အဖြစ် အကျိုးခံစားမှုတွေ ရှိလာ ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း အားဖြင့် Quality ( ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေး)၊ Productivity ( ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား)၊ Delivery (၀န်ဆောင်မှု အရည်အသွေး)၊ နှင့် Morale လို့ခေါ်တဲ့ (စိတ်ဓာတ်) ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ မှာ မြင့်မား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေနိုင်တယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အတွင်း မော်တော်ကာထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ မှာတော့ လူအားလုံးမြင်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ5S ရဲ့ အကျိုးတွေ ကို အခုလိုဖွင့်ဆိုရေးသားထားလေ့ရှိတယ်။
Benefits from5S
တကယ်တော့ 5S ရဲ့ နည်းလမ်းပုံစံဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်နေကြတဲ့ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ အတွက် သာ အကျိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ပါ5S ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ တွေးခေါ်ယူဆနည်းလမ်းပုံစံ ဟာ အသုံးချလို့ရပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးလောက မှာ တောင်5S လို အခြေခံကျတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်း တွေ ကို ကျင့်သုံးလာတာတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံရေး နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းပုံစံ ဘာဆိုင်သလဲလို့ မေးလာမည့် သူတွေလည်း ရှိကြမှာပါပဲ။
Posted by Burma Golf Club at 6:56 AM0comments Links to this post
ဂျိုးဇတ်ဆာရာနီ နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ တွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ တက်ကြွစွာ ပါဝင် လှုပ်ရှားနေတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဂျိုးဇတ်ဆာရာနီ ကို လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ကို သိရှိဖို့ ကိုမြတ်စိုး က မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
ဂျိုးဇတ်ဆာရာနီ ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် (Purdue University) ပါဒူး တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး၊ တောင်အာဖရိနိုင်ငံ မှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ကို သွားရောက်လေ့လာ ပညာဆည်းပူးခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာ နိုင်ငံ လူထု အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ပညာရေးလုပ်ငန်းတွေ ကို ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာ အခမဲ့ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အာဖဂ္ဂန် ရွေးကောက်ပွဲ၊ အိစ်တီမော ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်သူ တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ပြီး တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ဘူးသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့တဲ့ အတွက် သူရဲ့ ထင်မြင်ချက် စာသားတွေ ကို ကောက်နုတ် ၍ သာ ဖော်ပြသွားပါမည်။
မြတ်စိုး- ခင်ဗျား မြန်မာပြည်အတွက် ဘာတွေ လုပ်နေသလဲဆိုတာ ပြောပြလို့ရမလား။
ဂျိုးဇတ်ဆာရာနီ- ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အခြေအနေတွေ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာဖို့အတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက် က ၀ိုင်းဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေ ကို လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။
မြတ်စိုး- ခင်ဗျားဟာ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူထု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ထိစပ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နိုင်ငံတကာ လူမှုအထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ နှင့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အပေါ် ဘယ်လို သုံးသပ်ချင်ပါသလဲ။
ဂျိုးဇတ်ဆာရာနီ- ဒီမေးခွန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ကို လူမှုထောက်ပံ့ကူညီမှု လုပ်ဆောင်လိုကြသူတွေ အတွက် အဓိက ကျတဲ့မေးခွန်းတခုပါ။ ဘယ်နေရာ က ဘယ် အခြေအနေတွေ ကို စပြောရမလဲ မသိဘူးဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ လက်ရှိ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ လူထု အထောက်အကူ ပြုစေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးရှိသလို ကျနော်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေဟာလည်း တချို့နယ်ပယ်တွေမှာ ကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေ ကို ပြုလုပ်နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ မှာ အခက်အခဲတွေရှိနေကြသလို ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မှာ စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေကြသေးတယ်လို့ သိရတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ လက်ရှိ အာဏာပိုင်တွေ နှင့် သူတို့ရဲ့ အသိုင်းအ၀န်း နီးစပ်သူတွေ နဲ့သာ ပူးပေါင်းပြီး လူထု အထောက်အကူပြု လုပ်ငန်းတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေရအောင် လုပ်ဆောင်နေကြရတယ်။ အစိုးရ အတွင်း ဗျူရိုကရေစီ ယန္တားယားတွေ ရှိနေမှုတွေကြောင့်လည့်း မတွင်ကျယ်ဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ အစိုးရ သစ် အောက်မှာတော့ အခွင့်အလမ်း ပိုမို တိုးတက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားကြတာပဲ။
တခြားတဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ ဟာ ရုံးလုပ်ငန်းတွေ၊ သင်တန်းတွေ၊ ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေ မှာ သုံးစွဲမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ များနေပြီး၊ အကူအညီတွေ လူထု လက်ထဲရောက်ရှိဖို့မှာ အားနည်းနေတာ ကိုတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေ လူထု ကို တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိစေဖို့ မှာ တိုးတက်မှုတွေ လိုနေသေးတယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ လူမှု အထောက်အကူပြုနေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ အဖွဲ့ အစည်းတွေထက် စာရင် ပြည်တွင်းမှာ တကယ်လုပ်ဆောင် နေကြတဲ့ လူထု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆယ်သွယ် ထိစပ်မှုတွေ လိုအပ် နေတာတွေ့ရတယ်။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ ကို ပိုက်လိုင်းတခု ထဲက မသွားစေချင်ဘူး။ ဒီ လို ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်လည်း ဗျူရိုကရေစီ ယန္တားယား အောက် က သွားနေသလိုပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
ကျနော့် အထင်တော့ ပြည်တွင်းမှာ လူထု အထောက်အကူပြုမှုတွေ ထိရောက်စေဖို့ ပြည်တွင်း လူငယ်တွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေ၊ ဗဟုသုတ တွေ ကို ဆက်လက်မြင့်တင်ပေးဖို့လိုသလို၊ ပြည်တွင်းမှာ လူထု အကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ စနစ်ကျတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ပေါ်လာဖို့ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်။ တချိန်ထဲမှာလည်း နိုင်ငံတကာ လူထု အထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မှာ ထင်သာမြင်သာရှိဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဓိက ကတော့ တကယ် အကူအညီ လိုအပ်သူတွေထဲ၊ တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိ ကူညီနိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေ ကို ရှာဖွေကြိုးစားလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာအောင် ကျနော်တို့ အားလုံး လုပ်ဆောင် ဖန်တီးကျိုးစားယူရမှာပါပဲ။
မြတ်စိုး - လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဂျိုးဇတ်ဆာရာနီ- လက်ရှိ သိန်းစိန် အစိုးရ သစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ တချို့နေရာတွေမှာ ကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေပါ။ ဥပမာ - နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးတာမျိုးပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ အများစု နေရာမှာတော့ ဟန်ပြ လုပ်ဆောင်နေမှုတွေ မျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဥပဒေကြောင်း နည်းလမ်းအရ လုပ်ဆောင်ပေးမှုမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ လားအိုး တို့ ကမ္ဘောဒီးယား တို့မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ အလားသဏ္ဍန် သွားတူနေတယ်။ အစိုးရ က စစ်တပ်ထောက်ခံမှုနဲ့ အာဏာကို ထိမ်းချုပ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် ကို ဆိုလိုတာပါ။ လက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရသစ် ဟာ လားအိုး တို့၊ ကမ္ဘောဒီယားတို့ နိုင်ငံတွေ မှာလို ပြောင်းလဲမှု ပုံစံမျိုး လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ကျနော် အထင်တော့ လက်ရှိ အစိုးရသစ်ဟာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်နေတယ်၊ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ အမှန်တကယ် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဦးတည်နေတယ်၊ လို့တော့ မထင်သေးဘူး။ စစ်တပ် က နိုင်ငံရေးမှာ အားသာမှုရှိအောင် လုပ်နေတဲ့ အဆင့်လို့ ပဲ သုံးသပ်မိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို တကယ်ပဲ သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ - အထွေထွေ လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် လို ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း ကို အာမခံချက်တွေပေးရမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေ ဖြစ်လာဖို့ အာမခံချက်တွေ ပေးရမယ်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံသားတိုင်းအားလုံး တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး နှင့် လူထု အထောက်အကူပြုမှု လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ ပွင့်လင်းပြီး၊ ထင်သာမြင်သာတဲ့ ဥပဒေတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။ လူထု အကျိုးအတွက်၊ လူထု ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ရမည့် ဥပဒေတွေ ကို ရိုးသားစွာ ပြင်ဆင်ချင်တဲ့ သတ္တိရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ် တိုးတက် ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို လိုလားတယ်ဆိုရင် အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ရိုးရိုးသားသား လုပ်ရမည့် အချက်တွေပါ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို လျောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုပြီး အာဏာ ခွဲဝေမှုတွေ မှာ စစ်တပ် ကို ဗဟိုထား ဦးစား ပေးလုပ်ဆောင်မှု တွေရှိနေတုန်းပါ။ ဥပမာ - ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အရ စစ်တပ် ဟာ ပထမ ဦးစာပေး အဆင့်မှာ ရှိနေတုန်းပါ။ လူထု အကျိုး နှင့် လူထု ကို ကာကွယ်ပေးမှု က ဒုတိယ ဦးစား ပေး အဆင့်မှာသာရှိနေတာ တွေ့ရတယ်။ လက်ရှိ အာဏာ ပိုင်တွေ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေ ပေါ် မှာ လည်း တာဝန်ယူမှု မရှိသေးဘူး။ အထက် နဲ့ အောက် က လည်း ကွဲပြားခြားနားစွာ လုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်။
ဥပမာ- ယုံကြည်မှုတည်ဆောက် နေတယ်လို့ အထက် က ပြောနေပေမဲ့၊ အောက်ခြေ အာဏာပိုင်တွေ က လေးစား လိုက်နာမှု မရှိတာတွေ့နေရတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ အကြံပြု ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတဲ့ အာရှ လူမှု အဖွဲ့ ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာ မှာလည်း ဒီ အချက်တွေကို မီးမောင်းထိုးပြထားတာတွေ့ရတယ်။
Myat Soe: Will you tell me "what are you doing for Burma" ?
Joe: Of course, I am supporting any move to improve the situation inside.
Myat Soe: Can you share your opinion on International NGOs operation in Burma?
Joe: That’sabig question, so I don’t know where to start. Over decades, Burma has steadily deteriorated. Military leaders still continue to govern the country inahighly authoritarian manner.
In short, the daily life of the average citizen in Burma is characterized by grinding poverty, declining health standards, and abysmal humanitarian conditions. Indeed, the people of Burma need helps to improve in education, health and human resources. We must create opportunities to expand humanitarian space.
But, I do have friends working there now for NGO’s, and they said the situation is not good.
In my opinion, it is for sure, we need helping to build local capacity and structures. At the same time, NGOs also need to do Improving transparency in decision making and policy implementation.
Myat Soe: How do you see on the current political situation in Burma?
Joe: “The Changes that have been made by the new “government” are good, but they are mostly cosmetic. The government owns everything and has made the constitution so they still control the government. It is very similar to Laos and Cambodia and all of Asean countries. Authoritarian government mixed with military. Military power in politics is first, the people of Burma come second.
Seem like we messed up the country; we don’t want to take accountability and responsibility. We own everything now, so will liberalize in exchange for no grand compromise.
I believe they are just playing fromaposition of strength. It is not work. Look at Laos and Cambodia. They are “free and democratic” but not really. I think the government in Burma will do the same. Act like they are democratic, play the big investors, and keep all the power in the military elites. So, I don’t believe that it is true reform. It is just enough to get investment. It is all about money, freedom is second.
ံHere, I want to point out that Asian Society has suggested the central requirement for the improvement of governance and institutional quality in Burma is the removal of the military from its central position of power. Burma’s new constitution (2008) ensures that the military cannot be excised from the legislative process, and therefore little can be expected from the document on this front.
Posted by Burma Golf Club at 6:55 AM0comments Links to this post
ခေတ်၊ စနစ် နဲ့ လူတွေ ဟာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ...